काका फुचुङ्ग्री (२०७१ साउन भदौ ७ गते) | Saugat : Naya Yougbodh
काका फुचुङ्ग्री (२०७१ साउन भदौ ७ गते)
30th August 2014	·0Comments
फुचुङ्ग्री : हाम्रा केपी शर्मा ओली अंकल आजभोलि कांग्रेसले सात बुँदे सहमति नाघेको छ भनेको भन्यै हुनुहुन्छ काका ? के रै’छ र हो त्यो सात बुँदे ?
काका : यतिका वर्षसम्म नेपालको राजनीतिबारे जानकारी राखेर पनि अझैं नबुझेकी ? जति बुँदे भने पनि मुख्य बुँदाचाहिँ खानेकुरा कसरी खाने भन्ने हो क्या ? कांग्रेसले अलि बढी खान थाल्यो होला । अनि, तेरा केपी अंकललाई रिस उठ्दैन त ?
फुचुङ्ग्री : यसपालि दाङमा पनि बाढी पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति ग¥यो काका । यस्तो बेलामा उद्धार, राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था फटक से मिलाउनुपर्नेमा हाम्रा सिडिओ सापले त कछुवाको ताललाई समेत कुशलतापूर्वक उछिन्नु भो रे । बूढा त देख्दाको डाल मात्रै पो रै’छन् नि ?
काका : हेर्दाखेरि त तेरा सिडिओ साप खाइलाग्दा हिरोजस्ता छन् क्यारे । अघिपछि फुर्तिफार्ति पनि निकै देखाउँछन् बूढा । तर परीक्षा त कठिन घडीमै हुने त हो नि । चार/पाँच दिनपछि पो बूढाको सरकारी टोली हेलिकोप्टर चढेर विकट गाउँतिर गएको रे । त्यो पनि अझ चाउचाउ बोकेर । हाहाहा ।
फुचुङ्ग्री : अनि हाम्रा रुक्माङ्गद कट्वाल जर्सापले त आत्मकथा लेखेर एमाओवादी नेता प्रचण्डलाई थलै पारे रे नि ?
काका : तेरा प्रचण्ड अंकलले “रौं पनि नहल्लिएको” टिप्पणी गरेका छन् अरे । तर हल्लाउन त कटवाल बूढाले प्रचण्डको रौं मात्रै हैन कुर्सी पनि हल्लाएका हुन् । कुर्सी हल्लाएको मात्रै होइन भुइँमै खसालेका हुन् । यसो हेर्दा अब यी दुई बूढाको दोहोरी लामै चल्छ जस्तो छ फुच्ची ।
फुचुङ्ग्री : अनि हाम्रा निर्माण व्यवसायी अंकलहरुले त गिट्टी, ढुङ्गा र बालुवा निकाल्न पाउनुपर्ने मागसहित दाङमा यातायातै बन्द गरेछन् । हुन त कामै सरकारले बन्द गरिदिएपछि अरु काम त गर्नैप¥यो हगि ?
काका : उफ् !!! के–के सोध्छे यो फुचुङ्ग्री पनि ???!!!